यसो गर्दा मानिसको आयु कम हुँदै जान्छ, आजैदेखि छाड्नुस् यी पाँचवटा बानीव्यहोरा ! - Nepal News - Latest News from Nepal
यसो गर्दा मानिसको आयु कम हुँदै जान्छ, आजैदेखि छाड्नुस् यी पाँचवटा बानीव्यहोरा !
जीवन र मृत्यु भनेको ईश्वरको हातमा हुन्छ । मृत्यु कतिबेला र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेको वशको कुरा होईन । तर धार्मिक ग्रन्थहरुले जीवन र मृत्युको बारेमा धेरै कुराहरु भनिराखेका हुन्छन् । ग्रन्थले यो पनि भन्छ कि, ‘के ग¥यो भने मान्छेको आयु कम हुन्छ ?’ गीताप्रेस गोरखपुरले प्रकाशनमा ल्याएको संक्षिप्त गरुड पुराण अंकमा मानिसको आयु कम हुने पाँच कारणको बारेमा चर्चा गरिएको छ । र, हामीले ती पाँच कारणहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
रातिमा दही खानु
गरुड पुराणका अनुसार रातीमा दहि खानाले मानिसको आयु कम हुन्छ । त्यसो त दहि खानु मानिसको स्वास्थ्यको लागि लाभदायक मानिन्छ । तर सबै कुराको सेवन सहि समयमा गर्नुपर्छ । रातीको समयमा दहि खाँदा विभिन्न खाले पेटका रोगहरु लाग्ने पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । आर्युवेदले पनि रातीमा दहि खान नहुने बताउँदै आएको छ । किनभने रातीमा खाना खाईसकेपछि हामी बल प्रयोग गर्ने खालका कुनै काम गरिदैन । हामी सुतिन्छ, त्यहि कारणले हामीले खाएको खाना राम्ररी पच्दैन । पेटमा दहि नपचेको खण्डमा यसको धेरै खाले साईड ईफेक्ट हुन्छ । शरिरमा धेरै प्रकारका रोगहरु देखिन सक्छन् । त्यसैले रातीको समयमा दहि नखाएकै राम्रो ।
सुकुटी मासु सेवन गर्नु
सुख्खा खालको मासु धेरै खाँदा पनि मानिसको आयु कम हुन्छ । सुख्खा मासुको अर्थ यो हो की, बासी या पुरानो मासु । जब मासु केहि दिन पुरानो हुन्छ, यो सुख्खा हुन्छ । र, मासु सुक्दाखेरि त्यसमा धेरै प्रकारका खतरनाक ब्याक्टेरिया र भाईरसको संक्रमण हुन्छ । जब कसैले यस्तो सुख्खा मासु खान्छ, उसले त्यो सँगै ब्याक्टेरिया र भाईरस पनि निल्छ । जुन कारणले पेटको विभिन्न खाले रोग निस्कने खतरा हुन्छ । र, यस्ता रोगले मानिसको आयु कम गराउने काम गर्छ ।
विहान अबेरसम्म सुत्नु
विहानमा धेरै समय सम्म सुत्ने बानीले पनि मानिसको आयु कम गराउँछ । आर्युवेदका अनुसार दिउँसोको तुलनामा एका विहानैको हावा शुद्ध हुन्छ । र, विहानीपख यस्तो खाले शुद्ध हावामा हामी निस्कियौँ भने त्यसको प्रभावले विभिन्न खाले रोगहरु लाग्न पाउँदैनन् । र, शरिर स्वस्थ बन्छ । तर विहान अबेरसम्म सुत्ने बानीले मानिसले विहानीपख आउने शुद्ध हावाको सेवन गर्न पाउँदैनन् । र, विभिन्न खाले रोगले तपाईलाई समात्न थाल्छन् । त्यसैले विहान अबेर सम्म सुत्नु भनेको आफुले आफ्नै आयु घटाउनु हो ।
मशानघाटको धुवामा धेरै बस्नु
मशानघाटमा लाशलाई दाहसँस्कारको लागि लगिन्छ । शरिर मृत हुनासाथ त्यसमा विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरिया र भाईरसले संक्रमण गर्न थाल्छन् । मशानघाटमा दैनिक कैयौँ शवहरु जलाईन्छ । जब लाशलाई जलाईन्छ, कतिपय ब्याक्टेरिया र भाईरसहरु त्यहिँ नष्ट हुन्छन् भने कतिपय धुँवासँगै वायुमण्डलमा मडारिन्छन् । जब कोहि व्यक्ति त्यस्तो धुँवासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँछन्, धुँवासँगै आएका ब्याक्टेरिया र भाईरस उसको शरिरमा टाँसिन्छन् । र, त्यो मानिसको शरिरमा विभिन्न खाले रोग ब्याधी निम्त्याउन सक्छन् । यस्ता खाले रोगहरुले मानिसको आयु कम गराउनको लागि काफि हुन्छन् ।
विहानीपखमा धेरै यौनसम्पर्क गर्ने बानीले
विहानको बेलामा यौनसम्पर्क गर्ने बानीले पनि मानिसको आयु कम हुने पुराणमा उल्लेख छ । ग्रन्थअनुसार विहानको समय योग, प्रणायम जस्ता मनको शान्तिका लागि गरिने कामको लागि हो । यस्तो बेलामा शारिरीक सम्पर्क गर्दा शरिर कमजोर हुन्छ । र, निरन्तर यसो गरिरहँदा शरिर झन् झन् कमजोर बन्दै जान्छ । यदि यो क्रम धेरै भयो भने एउटा यस्तो समय पनि आउँछ कि शरिरमा रोगसँग लड्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन । र, धेरै खाले रोगहरु शरिरमा लाग्न सक्छन् । त्यसैले विहानपख यौनसम्पर्क नगरेकै राम्रो ।
दाँत र गिजाजन्य रोगबाट सहजै पार पाउन सकिने प्राक्रितिक घरेलु उपचार